မရောက်သွားသောစာ | ZAYYA
← ဟိုအကိုကြီးရဲ့ မခင်နှင်းဆီ
ဗမာ့အောင်ဆန်း ( ၄ ) →
My dear Adipadigyi,
I am sorry that I was unable to meet you before I came out here as I had promised you. Conditions were such that I had to do things inahurry. Sometimes I am afraid you might misunderstand me. I shall be coming back to Rangoon and if conditions do not worsen so unexpectedly, I hope to meet you again. Meantime I wish to send you some report.
As I said in my speech I would do my best to save the situation. But as you would also understand, there are ( dark days for us. The Japanese troops are with drawing to all intents and purposes.And I shall not be surprised if, before monsoon,the war in Burma is over.Anyway, I think I don’t blame the japanese too, for from the stategical point of view, if you might understand, this is the only wisest and sound course for them to do. Never the less there is still hope for us, I suppose of course, we shall have to be prepared to sturggle alone for sometime.But I have every confidence that our course will win ultimately.
War or no war, peace or no peace,) the struggle for our independence must go on till it ends in victory. And I well do my best. You might misunderstand me now perhaps. But believe me, after sometime, you will see whether I mean what I say. As present I have to fix up many things because there are so many angles to be straightened. Meantime I wish you to be prepared for the worst to do whatever possible in your line.
( ယင်းစာကို ဆီလျော်သလို ပြန်ဆိုပါသည်။ )
ကျနော် ထွက်မလာခင် အဓိပတိကြီးနဲ့ တွေ့မယ်လို့ ကျနော် ကတိပေးထားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်မလာတာ စိတ်မကောင်းပါ။ အခြေအနေတွေက အလျှင်စလို လုပ်နေရမယ့် အနေအထား တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ကျနော့အပေါ် နားလည်မှု လွဲမှာ စိုးရိမ်မိတယ်။ ကျနော် ရန်ကုန်ကို ပြန်လာပါမယ်။ အခြေအနေတွေက မျှော်လင့်မထားဘဲ ဖြစ်လာတာမျိုး၊ ဆိုးဆိုးရွာရွားမျိုးတွေသာ မရှိဘူး ဆိုရင် အဓိပတိကြီးနဲ့ ပြန်တွေ့ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်း အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ အချို့ကို ကျနော် ပေးပို့ပါမယ်။
ကျုပ်စကားမှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ကျနော်တို့အတွက် အခွင့်မသာတဲ့ နေ့တွေ ရှိနေဆဲပဲ ဆိုတာ အဓိပတိကြီး နားလည်မယ်။ ဂျပန်စစ်တပ်တွေ လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုး၊ ဦးတည်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆုတ်ခွာနေပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီမိုးမကုန်ခင် မြန်မာပြည်မှာ စစ်ပွဲ ပြီးသွားမယ် ဆိုရင်လည်း အံ့ဩစရာတော့ မရှိဘူး။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ စဉ်းစား စဉ်းစား ဂျပန်တွေကို အပြစ်တင်စရာတော့ မရှိဘူး။ သူတို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် ခုလို လုပ်တာကလည်း သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ၊ အသင့်မြတ်ဆုံးပဲဆိုတာ အဓိပတိကြီး သဘောပေါက် ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာ ကတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့မှာ မျှော်လင့်ချက် ရှိနေတုန်းပဲ။ ဒီခဏ အတောအတွင်းမှာ ကျုပ်တို့ချည်း ရုန်းကန်သွားရဖို့တော့ ပြင်ဆင်ထားရလိမ့်မယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲ – အပြီးသတ်မှာ အနိုင်ရ ရမယ်လို့ ကျုပ်ယုံကြည်တယ်။
စစ် နဲ့ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်၊ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ရရ မရရ ကျုပ်တို့ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲကို အပြီးသတ် အောင်ပွဲရ တဲ့ အထိ လုပ်ရမှာပဲ။ ကျုပ်ကတော့ အကောင်းဆုံး လုပ်မှာပဲ။ အဓိပတိ ကြီး အနေနဲ့ ကျုပ်အပေါ် နားလည်မှု လွဲကောင်း လွဲနေနိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာ ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်တယ် မဖြစ်တယ်ကို မြင်ရမယ် ဆိုတာ ယုံထားပါ။ လောလောဆယ် ကာလ ၊ ဘက်ပေါင်းစုံက ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ဖြေရှင်းသွားရဦးမယ်။ အဓိပတိကြီးအနေနဲ့ ကိုယ့်ကဏ္ဍကို ကိုယ် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးပမ်းရင်း အဆိုးဆုံးတွေအတွက်လည်း ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။